Home / Points You Need To Consider Before Studying Abroad
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်က စပြီး နိုင်ငံခြားပညာရေးကို စိတ်ဝင်စားပြီးလေ့လာ သင်ယူလိုတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသား အရေအတွက်က တစထက် တစ တိုးပွားလာတာကို တွေ့ရှိရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံခြားပညာရေးကို International Classroom Environment တွေနဲ့ သင်ကြားနိုင်တဲ့ International College တွေကလည်း ကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲ အများအပြား အပြိုင်အဆိုင် ဖွင့်လှစ်လာကြတာကလည်း မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပါပဲ။ ဒီလို နိုင်ငံခြား ပညာရေးကို သင်ကြားရခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ ပြောလို့ မကုန်နိုင်ပါဘူး။ ကမ္ဘာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းရင်း သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အသိပညာ ဗဟုသုတတွေ တိုးတက်လာပြီး Personal Development နဲ့ Potential ကိုလည်း အမြန်ဆုံးနဲ့ အမြင့်ဆုံး မြှင့်တင်နိုင်မှာကတော့ အသေအချာပါပဲ။
ဆိုတော့ ဒီလို နိုင်ငံခြား ပညာရေးကိုမှ စိတ်ဝင်တစား တက်ရောက်လိုတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အတွက် အခက်အခဲဆုံးသော အရာတစ်ခုက ဘယ်အချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်လို နိုင်ငံခြားပညာရေးတွေ သင်ကြားပေးနေတဲ့ ကျောင်းကို ရွေးချယ် တက်ရောက်ရမလဲဆိုတာ ဝေခွဲမရ ဖြစ်တတ်ကြတာပါပဲ။ မိမိဘဝရဲ့ ပညာရေးကို ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာ ကျောင်းသားဘ၀ စာသင်နှစ် တလျှောက်လုံး သင်ကြားရမယ့် ဘာသာရပ်တွေကို ရွေးချယ်ရုံတင်မဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ် ကို ကိုယ်တိုင် စိန်ခေါ်ရင်း ကိုယ်တိုင် လျှောက်လှမ်းရမယ့် အနာဂတ်ကို ရွေးချယ်လိုက်တာပါ။
ဒီတော့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်အနာဂတ်ကို ရွေးချယ် လျှောက်လှမ်း နိုင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး ပညာရေး ကို ရွေးချယ်မယ်၊ နိုင်ငံခြားပညာရေး ကို လေ့လာသင်ယူတော့မယ် ဆိုရင် ဘယ်လိုအချက်တွေကို ကြိုတင် စဉ်းစားထားရမလဲ သတိထားရမလဲ ဆိုတာ ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
ကဲ …. International Education ကို တက်ရောက်မယ် ဆိုပါစို့!
၁။ ကိုယ်ရွေးချယ်တက်ရောက်မယ့် Program က ကိုယ့် Career လမ်းကြောင်းကို အကောင်းဆုံးအရည်အချင်း တစ်ခု အနေနဲ့ တန်ဖိုးမြှင့်တင်ပေးနိုင်မှာလား?
ကိုယ်ရွေးချယ်တက်ရောက်မယ့် International Education ရဲ့ Program ဟာ ကိုယ့် Career ကို ရုပ်လုံးဖော်ပေးနိုင်မယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့အတွက် အလွယ်တကူ မရွေးချယ်လိုက်မိဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဘဝအတွက်ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ချမှတ်ဖို့ ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ အချက်အလက်တွေကို ဆန်းစစ်ပြီးမှ ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ (ဆိုလိုတာက ကိုယ်က Marketing နယ်ပယ်ထဲ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူဆိုရင် ကိုယ် တက်ရောက်မယ့် Marketing Program က Professional အဖြစ် ရပ်တည်ဖို့ ကိုယ့် Potential ကို ဘယ်လောက်ထိ မြှင့်တင်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် သဘောပါ။)
ကိုယ် တက်ရောက်မယ့် ဒီ Program နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ့်မှာ အခြေခံ စွမ်းရည် ဘယ်လောက်ရှိလဲ? ကိုယ်က Interantional Education ကို သင်ကြားမယ်ဆို အနည်းဆုံး English Skill လေး အခြေခံတော့ ရှိထားသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ Program က ကသက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာရော အသိအမှတ် ပြုခံရရဲ့လား? ကိုယ်က စီးပွားရေး လောကထဲ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင် ကိုယ် ရရှိထားတဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ဘွဲ့ဆိုတာကြီးကရော တကယ်ရော အသိအမှတ်ပြုခံရရဲ့လား အထူးသဖြင့် ကိုယ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်မယ့် စီးပွားရေးလောကထဲမှာ ပေါ့။ ဒါက စဉ်းစားရမယ့် အချက်တွေထဲမှာ အရေးကြီးဆုံးတွေထဲက တစ်ခုပါ။
ဘွဲ့ရပြီးတဲ့အခါမှာ ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပမှာ အလုပ်အကိုင်ကောင်းရရှိဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေရှိလား? ကိုယ်ရွေးချယ်မယ့် International ကျောင်းရဲ့ Job Opportunity က ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်တက်ရောက်မယ့် Program က ကိုယ့်ပြည်တွင်း အနေအထားမှာရော အထောက်အကူပြုရဲ့လား? နိုင်ငံခြားပညာရေးကို တက်ရောက်ချင်စိတ်အပြည့်နဲ့ ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာတင် Interanational Education Sector ကို ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက် လေ့လာပြီးမှ ကိုယ်တက်ရောက်လိုက်တဲ့ ဘာသာရပ်ဟာ ပြည်တွင်း အနေအထားအရ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းနေတာမျိး၊ ဒီ နယ်ပယ်က ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု မရှိသေးတာမျိုးတွေ မကြုံတွေ့စေဖို့အတွက် နိုင်ငံခြား ပညာရေးကို သင်ယူပြီး မိမိပြည်တွင်းမှာပဲ အလုပ်လုပ်လိုသူတွေဆိုရင် ဒီအချက်ကို ဦးစားပေးအနေနဲ့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
ဒါက ပထမ ဦးစားပေးအနေနဲ့ သတိထားပြီး စဉ်းစား သင့်တဲ့ အချက်တွေပါ။
ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ စဉ်းစားရမှာက ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ International Education ကို တက်ရောက်ဖို့ စိတ်ကြိုက် Program တစ်ခု တွေ့ပြီ ဆိုပါစို့။ ဒီနေရာမှာ ထပ်စဉ်းစားရမှာက
အခု ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ Programကို လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးမယ့် College က စစ်မှန်တဲ့ နို်င်ငံခြားပညာရေးနဲ့ နိုင်ငံတကာ က အသိအမှတ်ပြုရဲ့လား? International Education ကိုသင်ကြားတဲ့ College ရဲ့ International Course Structure တွေကရော လက်တွေ့မှာ အသုံးဝင်ရဲ့လား၊ ရရှိမယ့်ဘွဲ့ကရော Globally Recognized ဖြစ်ပါ့မလား ဆိုတာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် အချက်ပါ။
International Education ကိုမှ သင်ကြားချင်ပါတယ်ဆို မဖြစ်မနေ တွက်ချက်ရမယ့် အချက်က ကိုယ် အကုန်အကျခံနိုင်မယ့် ပညာရေးစရိတ်ပါ။ ဒီ Program တစ်ခုလုံး တတ်မြောက်ပြီးဆုံးအောင်မြင်တဲ့အထိ မိမိမှာ အခက်အခဲမရှိဘဲ အဆင်ပြေလုံလောက်တဲ့ ငွေကြေးပမာဏ ရှိရဲ့လားဆိုတာ ပြန်လည် ချင့်ချိန်သင့်ပါတယ်။
Scholarship, Study Grant နဲ့ Study Loan အစီအစဉ်တွေရှိလား? ကိုယ်ရွေးချယ်တက်ရောက်မယ့်ကျောင်းက ပညာရေးကို ဒီလို ချီးမြှင့်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ အစီအစဉ်တွေရှိမရှိဆိုတာ ဆန်းစစ်ပြီး ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်ဖြေဆို လျှောက်ထားတာမျိုးတွေပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
သင်တန်းကာလက ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ? ကိုယ်သင်ယူမယ့် Program ရဲ့ Duration ကို မေ့ထားလို့မရဘူး။ သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းကိုယ်ဟာ ဒီဘာသာရပ်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ တက်မြောက်ပါ့မလား၊ ဒါမှ မဟုတ် ဒီ ဘာသာရပ်အတွက် အချိန်တွေ ဒီလောက်ပေးဖို့ လိုအပ်ရဲ့လားဆိုတာ ဆန်းစစ်ပါ။
နေထိုင်စရိတ်ကရော ဘယ်လောက်ရှိမလဲ? အထူးသဖြင့် နယ်က လာသူတွေ အတွက်ပါ။ ကိုယ် နေထိုင်ရမယ့် အချိန်ကာလအတိုင်းအတာအပေါ် ဘယ်လောက်ထိ ကုန်ကျစရိတ် ရှိသွားမလဲဆိုတာကို ကြိုတင်တွက်ချက်ထားရပါမယ်။
ဒီအချက် လေးချက်ကတော့ ဒုတိယ ဦးစားပေးအချက်တွေပါ။
ဆိုတော့ International Education ကိုတက်ရောက်လိုသူတိုင်းအတွက် ဒီလိုအချက်အလက်တွေပေါ် မူတည် ဆုံးဖြတ်ပြီး အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ မိမိဘဝအတွက် အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပညာရေး ကဏ္ဍကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ ကိုယ်တိုင် စဉ်းစားပါ။ မိဘများနဲ့ တိုင်ပင်ပါ။ အမှန်တကယ် သိကျွမ်းနားလည်တဲ့ Educational Consultant တွေနဲ့ ဆွေးနွေးအကူညီယူပါ။
ကောင်းမွန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေနဲ့အတူ အောင်မြင်တဲ့ ဘဝခရီးလမ်းကို ကိုယ်တိုင် ပုံဖော်နိုင်ကြပါစေ။